ကက်သရင်း Howard - အဋ္ဌမမြောက်ဟင်နရီရဲ့အရှုပ်တော်ပုံပဉ္စမဇနီး
ခဏတာ: လူသိများ အဋ္ဌမမြောက်ဟင်နရီဖို့လက်ထပ်ထိမ်းမြား : သူမသည်သူ၏ပဉ္စမဇနီးဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ထက်နည်းနှစ်နှစ်အကြာတွင်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်နှင့် unchastity များအတွက်ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရ
ရက်စွဲများ: အကြောင်းကို 1524? - ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 1542 (1518 ကနေ 1524 မှသူမ၏ကလေးမွေးဖွားတစ်နှစ်အကွာအဝေး၏ခန့်မှန်းချက်)
ကက်သရင်း Howard အကြောင်း
ကက်သရင်းရဲ့အဖေ, သခင်ဦး Edmund Howard, တစ်ဦးသားငယ်ဖြစ်ပြီး, ကိုးကလေးများနှင့် primogeniture အောက်မှာအမွေခံခွင့်မရှိသောနှင့်အတူသူသည်ချမ်းသာနှင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက်ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ကျရောမှီခို။
1531 ခုနှစ်တွင်, သူ့တူမများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှတဆင့်အန်း Boleyn ဦး Edmund Howard Calais အတွက်အဋ္ဌမမြောက်ဟင်နရီများအတွက် comptroller အဖြစ်အနေအထားကိုရရှိခဲ့သည်။
သူမ၏ဖခင် Calais မှသွားသောအခါကက်သရင်း Howard Agnes Tilney,-Norfolk, သူမ၏ဖခင်ရဲ့မိထွေး၏ Dowager Duchess များပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးသို့ပို့ခဲ့သည်။ ကက်သရင်း-Norfolk အိမ်မှာထို့နောက် Chesworth အိမ်မှာ Agnes Tilney နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ ကက်သရင်း Agnes Tilney ရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်အသက်ရှင်ဖို့ကိုစလှေတျအမြားအပွားငယ်ရွယ်မှူးမတ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် - နှင့်ကြီးကြပ်မှုအထူးလျော့ရဲရဲခဲ့သည်။ စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းနှင့်ဂီတပါဝငျသောကက်သရင်းရဲ့ပညာရေး, Agnes Tilney အားဖြင့်ညွှန်ကြားထားခဲ့သည်။
ဂီတနည်းပြဆရာ, ဟင်နရီ Manox (Mannox သို့မဟုတ် Mannock) နဲ့ - ဖွယ်ရှိ consummated ရမတဦးတည်း - အကြောင်း 1536, Chesworth အိမ်မှာ Agnes Tilney နှင့်အတူနေထိုင်စဉ်, ကက်သရင်း Howard တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမ Manox နှင့်အတူသူမ၏ဖမ်းမိသည့်အခါအဲဂျ Tilney သတင်းများအရကက်သရင်းလုပ်ကြံလေ၏။ Manox-Norfolk အိမ်မှသူမ၏နောက်တော်သို့လိုက်နှင့်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
ဟင်နရီ Manox Frances Dereham, အတွင်းရေးမှူးနှင့်ဆွေမျိုးများကငယ်ရွယ်ကက်သရင်းရဲ့ချစ်ခင်အတွက်အစားထိုးခဲ့သည်။ ကက်သရင်း Howard ကက်သရင်း Tilney အတူ Tilney အိမ်မှာနေတဲ့အိပ်ရာ shared, ထိုသူနှစ်ယောက်ကက်သရင်း Dereham ဖွငျ့နှင့် Edward Malgrave ဟင်နရီ Manox, ကက်သရင်း Howard ဟောင်းမေတ္တာဝမ်းကွဲတို့က၎င်းတို့၏ bedchamber အတွက်အကြိမ်အနည်းငယ်သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
အသင်းတော်လက်ထပ်ထိမ်းမြားတဲ့စာချုပ်ပမာဏအဘယျသို့ - ကက်သရင်းနှင့် Dereham ပုံသတင်းများအရတစ်ဦးချင်းစီကတခြား "ခင်ပွန်း" နှင့် "ဇနီး" နှင့်အလားအလာလက်ထပ်ထိမ်းမြားတောင်းဆို, သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ consummate ကိုပြု၏။ ဟင်နရီ Manox ဆက်ဆံရေး၏အတင်းအဖျင်းကြားလျှင်, မနာလို Agnes Tilney ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Dereham သတိပေးမှတ်ချက်မြင်လျှင်, သူက Dereham Manox နှင့်အတူကက်သရင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသိကြောင်းဆိုလိုရာ Manox, ကရေးသားခဲ့မှန်းဆ။ Agnes Tilney နောက်တဖန်သူမ၏အပြုအမူများအတွက်သူမ၏မြေးမလေးလှုပ်ခတ်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ငှါရှာကြံလေ၏။ ကက်သရင်းတရားရုံးမှစေလွှတ်လျက်, Dereham အိုင်ယာလန်သို့သှားကွ၏ခဲ့သည်။
ကက်သရင်းအဋ္ဌမမြောက်ဟင်နရီရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် (စတုတ္ထ) မိဖုရား, ရန်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်အစေခံဖို့ပဲ Cleves ၏အန်း မကြာမီအင်္ဂလန်တွင်ရောက်ရှိမည်။ ကက်သရင်းရဲ့အဖေ 1539. သောမတ်စ် Howard ၏မတ်လအတွင်းသေဆုံးသွားအတိုင်းဤတာဝန်ကျတဲ့နေရာဖြစ်ကောင်းသူမ၏ဦးလေး, သောမတ်စ် Howard,-Norfolk ၏ Duke နဲ့ဟင်နရီရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တဦးကစီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည် Cromwell နှင့် Cranmer ဆန့်ကျင် align လုပ်ဖို့, တရားရုံးမှာပိုပြီးဘာသာရေးအရရှေးရိုးစွဲအဖွဲ့ခွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, အဘယ်သူသည် ဘုရားကျောင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများအတွက် ပို. ရပ်နေ၏။
Cleves ၏အန်း 1539 ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအင်္ဂလန်တွင်ရောက်ရှိလာခဲ့နှင့်ဟင်နရီပထမဦးဆုံးကြောင်း event မှာကက်သရင်း Howard မြင်ကြပြီဖြစ်နိုင်သည်။ သူသည်မိမိအသစ်ကိုအိမ်ထောင်မှာအတော်လေးလျင်မြန်စွာမပျော်ဖြစ်သကဲ့သို့တရားရုံးမှာကက်သရင်း, ရှငျဘုရငျ၏အာရုံကိုဆွဲငင်။
ဟင်နရီ Cleves ၏အန်းအားမိမိအိမ်ထောင်ကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တွင်ဿဟာယပျက်ခဲ့ 1540. ဟင်နရီရက်ရက်ရောရောသည်သူ၏ငယ်ရွယ်သော-အများကြီးအလွန်ဆွဲဆောင်မှုသတို့သမီးအပေါ်လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်အခြားစျေးကြီးလက်ဆောင်တွေအထက်တွင်ရှိသည်ဟုဇူလိုင်လ 28 ရက်နေ့တွင်ကက်သရင်း Howard လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲနေ့တှငျ Cleves ၏အန်းမှဟင်နရီ၏အိမ်ထောင်ကိုစီစဉ်ပေးခဲ့သူသောမတ်စ် Cromwell, ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကက်သရင်းလူသိရှင်ကြားသြဂုတ်လ 8 ရက်နေ့တွင်မိဖုရားအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
စောစောလာမည့်နှစ်တွင်, ကက်သရင်းတစ် flirtation စတင်ခဲ့ပြီး - ဖြစ်ကောင်းပိုဖြစ်ကောင်းထဲသို့ဖိအားပေး - စသူမ၏မိခင်ရဲ့ဘက်မှာဝေးသောဆွေမျိုးသူဟင်နရီရဲ့အကြိုက်ဆုံးထဲကတစ်ခု, သောမတ်စ် Culpeper, သူ lechery များအတွက်ဂုဏ်သတင်းရှိခဲ့အတူ။ သူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးများစီစဉ်သည့် privy ခနျးကက်သရင်းရဲ့အမျိုးသမီးခဲ့ ဂျိန်း Boleyn , သူ့အစ်မနှင့်အတူကွပ်မျက်ခံရခဲ့သောသမ္မတကတော် Rochford, ဂျော့ခ်ျ Boleyn ၏မုဆိုးမ အန်း Boleyn ။
Culpeper ပစ္စုပ္ပန်အခါသမ္မတကတော် Rochford နှင့်ကက်သရင်း Tilney သာလျှင်ကက်သရင်းရဲ့ခန်းသို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ Culpeper နှင့်ကက်သရင်း Howard ချစ်သူများဖြစ်ကြသည်, ဒါမှမဟုတ်သူမသူ့ကိုအားဖြင့်ဖိအားပေးခံခဲ့သည်သော်လည်းသူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာဖို့ acquiesce မပြုခဲ့ခြင်းရှိမရှိ, သမိုင်းပညာရှင်တို့ကစောဒကတက်သည်။ ဟုတ်မဟုတ်
ကက်သရင်း Howard ပို. ပင်မဆင်မခြင်ကြောင်းကြားဆက်ဆံရေးကိုလိုက်ဖို့ထက်ရှိ၏ သူမကသူမ၏ဂီတပညာရှင်နှင့်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်တရားရုံးကသူမကိုဟောင်းချစ်သူများဟင်နရီ Manox နှင့် Frances Dereham ဆောင်ခဲ့လေ၏။ Dereham သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုမှမျးတငျ, သူကသူတို့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုသူတို့ကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ချိန်းကြပြီဖြစ်နိုင်သည်။
ကက်သရင်း Howard တစ်ဦးထက်ပိုသောကက်သလစ်-မြှောင်ရှေးရိုးစွဲအဖွဲ့ခွဲကိုယ်စားပြုသည်။ Agnes Tilney ၏အိမ်တော်မှာဟောင်းတစ်ဦးအိမ်ဖော်များ၏အစ်ကို Dereham နှင့်အတူကက်သရင်းရဲ့ precontract ၏စွပ်စွဲချက်အပါအဝင်ပရိုတက်စ-မြှောင်ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးသောမတ်စ် Cranmer မှကက်သရင်း Howard ရဲ့နုပျို escapades သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ 2, 1541 တွင်, Cranmer ကက်သရင်းရဲ့အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန် indiscretions ပတ်သက်. စွပ်စွဲချက်နှင့်အတူဟင်နရီရင်ဆိုင်။ ပထမဦးဆုံးမှာဟင်နရီစွပ်စွဲချက်များကိုမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ Dereham နှင့် Culpeper ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရပြီးနောက်, ဤဆက်ဆံရေးအတွက်သူတို့ရဲ့စိတျအပိုငျးဝန်ခံနှင့်ဟင်နရီနိုဝင်ဘာလ6ပြီးနောက်နောက်တဖန်သူမ၏ကိုမြင်လျှင်, မကက်သရင်းစွန့်ပစ်။
Cranmer ထက်ထက်သန်သန်ကက်သရင်းဆန့်ကျင်မှုကိုလိုက်ကြ၏။ သူမသည်အားဖြင့်နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုကျူးလွန်, သူမ၏လက်မထပ်မီ, သူတို့၏လက်မထပ်မီညျရှငျဘုရငျကနေသူမကို precontract နှင့်သူမ၏ indiscretions ဖုံးကွယ်နှင့်အတူ "unchastity" နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ကိုလည်းမိဖုရားကြင်ယာတော်များအတွက်နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုလည်းဖြစ်ခဲ့သည်ထားတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်၏စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။
ကက်သရင်းရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုလည်းသူမ၏အတိတ်အကြောင်းကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်, အချို့ကက်သရင်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိတ်ဖုံးကွယ်ဘို့နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုလုပ်ရပ်များဖြင့်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ အခြို့သောသူတို့၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရသော်လည်းဤရွေ့ကားဆွေမျိုးသားချင်းလူအပေါငျးတို့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့သည်။
ကက်သရင်းနဲ့ Lady Rochford ဒီတော့ကံကောင်းကြဘူး။ နိုဝင်ဘာလ 23 ရက်နေ့တွင်မိဖုရား၏ကက်သရင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုသူမ၏ထံမှချွတ်ခဲ့သည်။ Culpeper နှင့် Dereham ဒီဇင်ဘာလ 10 နှင့်အပေါ်ပြသသူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာကွပ်မျက်ခံရခဲ့ကြသည် လန်ဒန်တံတား ။
ဇန်နဝါရီလ 21, 1542 တွင်, ပါလီမန်ကက်သရင်းရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုတစ်ခုဟာ executable ပြစ်မှုအောင် attainder တစ်ဥပဒေကြမ်းလွန်။ သူမသည်ဖေဖော်ဝါရီလ 10 ရက်နေ့တွင်မျှော်စင်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်, ဟင်နရီ attainder ၏ဥပဒေကြမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးဖြင့်, သူသည်ဖေဖော်ဝါရီလ 13 နံနက်အပေါ်ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ထို့အပြင်နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုအဘို့အခေါင်းဖြတ်သတ်သူမ၏ဝမ်းကွဲအန်း Boleyn, တူ, ကက်သရင်း Howard စိန့်ကပတေရုကြော်ငြာ Vincula ၏ Chapel အတွက်မဆိုအမှတ်အသားမပါဘဲသင်္ဂြိုဟ်လေ၏။ စဉ်အတွင်း ဘုရင်မကြီးဗစ်တိုးရီးယား 19 ရာစုတှငျ 's ကိုနန်းစံ, နှစ်ဦးစလုံးအလောင်းများကိုပြန်လည်တူးဖော်ခြင်းနှင့်ဖော်ထုတ်, သူတို့၏သင်္ချိုင်းသောအရပ်တို့ကိုမမှတ်သားခဲ့ကြသည်။
ဂျိန်း Boleyn, သမ္မတကတော် Rochford ကိုလည်းခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ သူမသည်ကက်သရင်း Howard နှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်လေ၏။
Catharine, ကက်သရင်း, Katharine, Kathryn, Katheryn: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
အန်းခရော, အယ်ဒီတာ။ အင်္ဂလန် 1100-1547 ၏မိဖုရား၏ပေးစာ။ 1997 ။
အဲန်တိုနီးယား Fraser ။ အဋ္ဌမမြောက်ဟင်နရီ၏ဇနီး။ 1993 ခုနှစ်။
Alison Weir ။ အဋ္ဌမမြောက်ဟင်နရီ၏ခြောက်ဇနီး။ 1993 ခုနှစ်။
မိခင်: Joyce (Jocasta) Culpeper Legh, ဆာရစ်ချတ် Culpeper ၏သမီး (ဒုတိယအိမ်ထောင်မင်္ဂလာ; Stockwell ၏ Ralph Legh မှသူမ၏ပထမဦးဆုံး)
ခမညျးတျော: သခင်ဘုရားဦး Edmund Howard, သောမတ်စ် Howard,-Norfolk ၏ဒုတိယ Duke နှင့်ဧလိရှဗက် Tilney ၏သားငယ်
မောင်နှမ: သူမ၏မိဘများနှစ်ဦးစလုံးသည်နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ခဲ့ကြသည်။ သူမသည်အကြောင်းကိုငါးအပြည့်အဝမောင်နှမရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမ၏မိခင်ရဲ့သားသမီးများ၏, ကက်သရင်းကိုးမောင်နှမရှိခဲ့ခြင်းနှင့်စတုတ္ထကလေးကဖြစ်ခဲ့သည်။
အဲလစ်ဇဘက် Cheney သူမ၏အကြီးအ-အဖွားရှိ၏ အဲလစ်ဇဘက် Cheney ၏အခြားအကြီးအ-မြေးပါဝင်သည် အန်း Boleyn နှင့် ဂျိန်း Seymour , အဋ္ဌမမြောက်ဟင်နရီ၏ဒုတိယနှင့်တတိယမယားများ
ကက်သရင်း Howard သူ၏မိခင် (အဲလစ်ဇဘက် Howard, သောမတ်စ် Boleyn လက်ထပ်) ကက်သရင်းရဲ့အဖေ၏ညီမခဲ့အန်း Boleyn, တစ်ဦးပထမဦးဆုံးဝမ်းကွဲခဲ့
ခင်ပွန်း: အဋ္ဌမမြောက်ဟင်နရီ (ဇူလိုင်လ 28 ရက်, 1540 လက်ထပ်)
Agnes Tilney, ကက်သရင်းရဲ့အဖေ၏မိထွေး, 1531 ကနေကက်သရင်းရဲ့ပြုစုပျိုးထောင်နှင့်ပညာရေးတာဝန်ခံခဲ့သည်
ဂျိန်း Addams Quotes
ဂျိန်း Fonda နှင့် POWs: သုံးခုထဲကတစ်ခုမှာ
အဲလစ် Duer Miller က
# 13 # 10 Delphi ကုဒ်ထဲမှာအဘို့အဘယ်သို့ရပ်သနည်း?
တောင်ပိုင်း Waxmyrtle ၏ Essentials
ထိပ်တန်း 10 အကြီးမြတ်ဆုံးဘို Diddley သီချင်းများ
မစ္စစ္စပီပြည်နယ် - င်ခွင့်များအတွက် GPA နှင့်စမ်းသပ်ခြင်းရမှတ်
အဆိုပါ Post ကို-Impressionist လပ်ြရြားမြ
IEP - တစ်ဦးချင်းပညာရေးအစီအစဉ်
ကောလိပ်ရော့ခ်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုမူလ '' 80s အခြားရွေးချယ်စရာ
Isometric စက္ကူ, သင်္ချာဇယားများ, Grid, ဇယားစက္ကူ
အဆိုပါ 2000 ခုနှစ် 10 သြဇာအရှိဆုံးတေးဂီတအဖွဲ့များ
စမတ်အသံဖို့ကိုဘယ်လို: 'အဆိုပါရထားပေါ်တွင်မိန်းကလေး' '
အိမ်နှင့်နေအိမ် - Beginners- Haus und Hof များအတွက်ဂျာမန်
တစ်ဦးသည် သာ. ကောင်း၏ Homeschooling ဆရာဖြစ်လာ3လက်တွေ့နည်းလမ်းများ
-Anglo-ဇူစစ်ပွဲ: Isandlwana ၏တိုက်ပွဲ
အဆိုပါဖြစ်နိုင်ပါ့မလားသည့်စကား '' စိတ်ရင်းမှန်တဲ့ '' ၏ Origins နဲ့ 'ရိုးသားစွာ' '